Dzvinyirira iyo haptic mhinduro yeiyo iPhone 7 | IPhone nhau
Vazhinji venyu muchatova neiyo nyowani mumaoko enyu iPhone 7 uye iPhone 7 Uyezve, zvishandiso zviviri zvitsva izvo, kunyangwe vasina shanduko dzinoyevedza dzekushandura, kubvisa makamera matsva uye kubviswa kweiyo minijack chiteshi, zvishandiso zvine maficha nyowani.
Uye ndezvekuti, pakati pezvimwe zvinhu, iwe unofanirwa kungobata iyo bhatani idzva reKumba. Bhatani idzva reKumba iro pamusoro pekubvumidza yedu iPhone 7 kusagadzikana nemvura, harisi bhatani rekushandisa. Ndiyo capacitive pamusoro inoita iyo taptic mota (vibrator nyowani) yeDevices edu anotipindura ne diki vibration (haptic mhinduro) izvo zvinotipa isu manzwiro ekudzvanya bhatani. Asi iko kunzwa kunopfuurira mberi, ikozvino kana iwe uchifambisa chero kudzora kwemamenyu echigadzirwa chako unenge uine iko kudiki kudedera. ¿Kuneta kweiyo iPhone inoramba ichiburitsa kudedera kudikiIpapo isu tinokuratidza maitiro ekudzima iyi haptic mhinduro yeiyo nyowani iPhone 7 uye iPhone 7 Plus.
Sezvatakakuudza, Vazhinji venyu muchawana iyo nyowani mhinduro yeiyo iPhone inogumbura, usazvidya moyo, inogona kuremara nekutevera matanho mashoma akareruka, mukuwedzera, haungarasikirwe nemhinduro yebhatani idzva reKumba, ndiko kuti, iwe ucharamba uchicherekedza iyo diki vibration (haptic mhinduro) inoitika kana iwe uchidhinda.
Para deactivate the other vibrations, enda kune iyo Zvirongwa app ye iPhone yako uye iwe uchaona iyo yapfuura menyu, ipapo isu tichafanirwa kudzvanya iyo nyowani menyu "Zvinonzwika nekudengenyeka" (Isati yasvika iOS 10 yaingodaidzwa kuti Sounds).
Ipapo iwe uchaona iyo yapfuura menyu, pazasi ese marongero eruzha iwe aunogona kuona iyo "System vibration" sarudzo kune iyo ngano inoperekedza: Bvisa kudedera (mhinduro haptic) nehukama hwekudyidzana uye kutonga. Nekuimisa, iwe unozotaura zvakanaka kune izvo zvidiki kudedera izvo zvinoperekedza zvese clicks yeiyo itsva iOS 10 uye iyo nyowani iPhone 7 uye iPhone 7 Plus.
Unovasuwa here? Iwe unozongofanira kuimisikidza zvakare kuti uve neaya madiki maungira zvakare. Iko hakuna data asi pachezvangu ini ndingati izvi kudedera hazvidzikise bhatiri saka wadii kuvasiya kana zviri zvitsva zveiyo yedu nyowani iPhone 7?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 10 » Dzima haptic mhinduro pane iPhone 7
ndinofara kuibvisa! Ndatenda
Yangu haina kumbobvunda ... haishande